Ny varotra telovolana vaovao an'ny Dell $ 26,1 miliara, ny tsena dia mbola mitaky fangatahana PC - YIC International Co Limited |Ny mpamatsy fitaovana elektronika mihodina |www.YIC-Electronics.com
Home > News > Ny varotra telovolana vaovao an'ny Dell $ 26,1 miliara, ny tsena dia mbola mitaky fangatahana PC
Ny varotra telovolana vaovao an'ny Dell $ 26,1 miliara, ny tsena dia mbola mitaky fangatahana PC
Tamin'ny alakamisy, Dell Technologies Inc. dia nanambara ny tatitra ara-bola vaovao isan-telovolana. Tamin'ny telovolana nifarana tamin'ny 29 Janoary, ny fivarotana ny orinasa dia nitombo 9% ka hatramin'ny US $ 26,1 miliara, mampiseho fa izao tontolo izao Ny fangatahana dia mijanona ho matanjaka.
Araka ny tatitra nataon'ny Bloomberg tamin'ny 25 febroary, teo ambany fitarihan'ny CEO Michael Dell, ny orinasa dia miasa mba hampihenana ny fiankinan-doha amin'ny varotra fitaovana indray mandeha miaraka amin'ny taha ambany tombom-barotra ary hanova ny tenany ho toy ny iray amin'ny famandrihana. Mpivarotra serivisy informatika. Na dia eo am-pandrosoana aza ity tetezamita ity dia mbola manana ny antsasaky ny vola miditra amin'ny orinasa hatramin'ny fivarotana PC ka hatramin'ny mpanjifa ara-barotra sy mpanjifa.
Ny vidin'ny tahiry Dell dia nakatona tamin'ny $ 79.72 tany New York tamin'ny Alakamisy, ary ny tahiry dia nitombo manodidina ny 9% tamin'ity taona ity.
Nilaza ny orinasa fa tamin'ny telovolana fahefatra, ny fidiram-bolan'ny solosaina manokana dia nitombo 19% ka hatramin'ny 3,8 miliara dolara. Mifanohitra amin'izany kosa, ny telovolana teo aloha dia nitombo 14%, ary ny fivarotana PC tamin'ny orinasa sy sampan-draharaham-panjakana dia nitombo 16% ka hatramin'ny 9,9 miliara dolara.
Ny fivarotana mpizara sy tambajotra dia nitombo 3% isan-taona isan-taona ka hatramin'ny $ 4,4 miliara. Ity tahirin-kevitra ity dia nihena isan-taona isan-taona ho an'ny teti-bola ara-bola 7 misesy, raha ny fidiram-bolan'ny fitaovana fitahirizana kosa dia nidina 2% ka hatramin'ny 4,4 tapitrisa dolara amerikana.